Xildhibaanada Baarlamaanka Sweden oo daawanaya filim ku saabsan Soomaalida | Somaliska
Filimka caan baxay ee “Trevligt Folk” ee ku saabsan kooxda barafka Somalia ee ka dhisan magaalada Borlänge ayaa isbuuca soo socda laga daawan doonaa baarlamaanka Sweden (Riksdagen). Ragga sameeyay filimka ee kala ah Filip iyo Fredrik ayaa horay u codsaday in lagu casuumo baarlamaanka si ay ula daawadaan filimkaan oo aad ay ula dheceen dadkii daawaday. Hada ayaa baarlamaanka lagu casuumay raggaan in ay filimka u daaraan dhamaan xildhibaanada baarlamaanka.
Filimka ayaa la filayaa in baarlamaanka uu daawan doono maalinta arbacada ee taariikhdu tahay 4 maarso. Filip iyo Fredrik ayaa sheegay in ay aad ugu farxeen in lagu casuumay baarlamaanka, iyagoo aaminsan in filimkaan uu muhiim u yahay guud ahaan bulshada Sweden maadaama uu ku saabsan yahay isdhexgalka. Filimkaan ayaa ilaa hada waxaa daawaday dad gaaraya 75 000 qof kuwaasoo aad u jeclaystay . Waxa uu noqday filim aragti fiican ka bixinaya Soomaalida ku nool Sweden.